Ukupheka iiresiphi yiwebhusayithi yeBlog yangempela. Iwebhusayithi yethu inikezelwe Ihlabathi le-gastronomy, kwaye kuyo sicebisa izimvo zezitya zoqobo ngelixa sithetha ngayo yonke into enxulumene nokupheka kunye nokutya.
El Iqela labaHleli bokupheka iiresiphi Yenziwe ii-foodies ezinomdla Ndonwabile ukwabelana ngolwazi lwabo kunye nezakhono kunye nawe. Ukuba ufuna ukubayinxalenye yayo, ungathandabuzi sibhale ngale fomu.
Ukupheka yenye yezinto endizithandayo ukusukela ndisengumntwana kwaye ndikhonza njengempundu kamama. Nangona ayinanto yakwenza nomsebenzi wam wangoku, ukupheka kuyaqhubeka nokundinika amaxesha amnandi kakhulu. Ndiyakuthanda ukufunda iiblogi zokupheka zikazwelonke nezamazwe aphesheya, ndigcina ulwazi lwakutshanje kunye nokwabelana ngovavanyo lwam lokupheka nosapho lwam ngoku nawe.
Ndiyakuthanda ukupheka, yenye yezinto endizithandayo, yiyo loo nto ndiqale ibhlog yam, Ukupheka noMontse, apho ndabelana khona neendlela zokupheka kubomi bemihla ngemihla ngendlela elula nelula kwaye ndiyonwabele.
Njengomthandi wokutya okumnandi, ndibhengeza ukuba ndingumntu othanda ukupheka ngokubanzi. Kukhetho lweemveliso kunye nomxube weencasa, ndifumana owam umzuzu wobuchule bemihla ngemihla. Apha ndabelana ngezitya zam endizithandayo kunye neeresiphi, umxube wokutya kwendabuko kunye nesonka samanye amazwe.
Ndikuthandile ukupheka ukusukela ndisengumntwana, okwangoku ndizinikele ekwenzeni ezam iiresiphi kunye nokuphucula yonke into endiyifundileyo kule minyaka idlulileyo, ndiyathemba ukuba uyazithanda iindlela zam zokupheka kanye njengoko ndifuna ukwabelana ngazo nawe.
Ingqondo yam ihlala ivulekile kwaye ndicwangciselwe ukuyila ngoku indikhokelele kwilizwe lekhitshi. Ndiyathemba ukuba uyazithanda iiresiphi zam kwaye uzisebenzise. Zimnandi!
Parishioner yokupheka kancinci kunye nebhiya yaseGuinness, bendilungiselela iiresiphi zokukhotha ngomnwe ixesha elide. Yesiko, yanamhlanje, ndinobuganga bokwenza nantoni na! Ukuzama kunye nokuzama iincasa ezintsha, ndiyathemba ukuba uyazithanda iiresiphi zam njengoko ndizenzayo.